ऊर्जामा बजेट : ‘लोडसेडिङ अन्त्यपछि निजी क्षेत्रलाई लात हानियो’ - UrjaKhabar ऊर्जामा बजेट : ‘लोडसेडिङ अन्त्यपछि निजी क्षेत्रलाई लात हानियो’ - UrjaKhabar
काठमाडाैं । सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्यो । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई करिब अन्त्य गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) तथा उत्पादकहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले थला परेको अवस्थामा जलविद्युत् क्षेत्रलाई माथि उठाउने गरी बजेटमा सम्बोधन नगरिएको गुनासो गरेका छन् । ऊर्जा खबरले यहाँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि विचारलाई यहाँ समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
‘ऊर्जा उत्पादकलाई लात हानियो’
शैलेन्द्र गुरागाईं, अध्यक्ष (इपान) : ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान आधाभन्दा बढी छ । यही कारण आज लोडसेडिङ अन्त्य भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । सरकारले हाम्रो योगदानको अवमूल्यन गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा बिर्सियाे । लोडसेडिङ सकिएपछि ऊर्जा उत्पादकलाई ताल हान्ने काम भयो । आएको बजेट विवेकहीन छ ।
‘अब आफैं संघर्ष गर्नुपर्ने देखियो’
सुवर्णदास श्रेष्ठ (सानिमा हाइड्रो) : कोभिड–१९ को असरलाई हेर्ने हो भने जलविद्युत्लाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्नुपर्ने थियो । बजेट भाषण सुनेपछि सरकार निर्माणाधीन आयोजनाका लागि संवेदनशील छैन जस्तो लाग्यो । जलविद्युतभन्दा पेट्रोलियम आयात बढाउने कुरा प्राथमिकतामा राखेको देखियो । ग्यास बोटलिङ र पेट्रोलियम भण्डारगृह निर्माणमा जोड दिइयो ।
विद्युत्बाटै पेट्रोलियम आयात कम गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा उल्टो भयो । अहिले निर्माणाधीन आयोजना आर्थिक हिसाबले अप्ठ्यारोमा छन् । यी आयोजनालाई सम्बोधन गर्ला भन्ने थियो तर भएन । अब निजी क्षेत्र आफैंले ऊर्जा उत्पादनमा संघर्ष गर्नुपर्ने देखियो । आफैं सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिनु पर्ने देखियो ।
‘निजी उत्पादकको अवमूल्यन’
सूर्यप्रसाद अधिकारी (बाराही हाइड्रो) : निजी क्षेत्रको अवमूल्यन हुने गरी बजेट आयो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रणालीमा योगदान गरेका तथा कोभिड–१९ पूर्व नै रुग्ण आयोजनालाई उपेक्षा गरिएको छ । सरकारले बेवास्ता गर्दाको नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने देख्नलाई अब धेरै समय कुर्नु नपर्ने भयो ।
आधाभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने अर्थ तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्वान प्रशासकहरूको नियत कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । यो भन्दा घोर अवमूल्यन अरू हुनै सक्दैन । ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान के रहेछ भन्ने देखाउन हामी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ ।
‘फेरि लोडसेडिङ सम्झाउनुपर्ने बाध्यता’
भरत थापा (खानीखोला हाइड्रो) : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने अपेक्षा हामीले गरेका थियौं । तर, उपेक्षा हुने गरी बजेट आयो । विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने थियो । तर, हतोत्साही बनाएको छ । अब सरकारलाई लोडसेडिङ सम्झाउनुपर्ने बाध्यता आयो ।
‘निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा नलाग भनियो’
कृष्ण आचार्य, अध्यक्ष (पिपुल्स हाइड्रो) : संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन । विगतमा गरेका घोषणालाई निरन्तरता समेत दिइएन । बरु कसरी हुन्छ अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कुरा आयो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न पुर्याएको योगदान सरकारले बिर्सिएको अनुभूति भएको छ । सरकारले अब निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा नलाग भनेको हो ?
‘निजी क्षेत्रले क्षमता देखाउन नसकेको परिणाम’
कृष्णप्रसाद भण्डारी (जलविद्युत् अभियन्ता) : निजी क्षेत्रको उपेक्षा गरेर बजेट आएको छ । विगतमा केही न केही सम्बोधन हुन्थ्यो । तर, आगामी वर्षको बजेटले छुन सकेन । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको परिणाम देखियो ।
निजी क्षेत्रका आयोजनामा वैदेशिक लगानी आउने कुरा पनि अटाएन । महत्त्वपूर्ण योगदान हुँदा–हुँदै निजी क्षेत्रलाई कमजोर ठानियो । जलविद्युत् उत्पादनले मात्र गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने नबुझे जस्तो लाग्यो । बजेटले सम्बोधन नगर्नु निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु हो । अनुमतिपत्रमा गरिएको कडाइले लगानी थप कठिन हुनेछ ।
‘राहतको ‘र’ पनि आएन’
सीताराम तिम्सिना, अध्यक्ष (माउन्टेन हाइड्रो) : बजेटमा म र म जस्ता ऊर्जा उत्पादकका लागि केही छैन । बजेट त पहाडबाट खसेको ढुङगो रुखको फेदमा अड्किए जस्तो पनि भएन । कोभिड–१९ का कारण जलविद्युत् धराशायी बनेकाले बैंकको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने भनिएको थियो । त्यो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्कुलर अनुसार हुने भनियो । यस्तो संकटपूर्ण घडीमा बैंकलाई १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेको छ । विदेशीलाई आउ भनियो तर हामी स्वदेशीलाई राहतको ‘र’ उच्चारण गरिएन ।
‘निजी क्षेत्रको बिजुली नचाहिने भयो’
बटु लामिछाने, अध्यक्ष (सिंगटी हाइड्रो) : सरकारले १०८ वर्षमा गर्न नसकेको काम निजी क्षेत्रले २७ वर्षमा ग¥यो । सरकारलाई उछिनिसकेको छ । निजी क्षेत्रकै योगदानले लोडसेडिङ हटेको बिर्सियो । अब थप बिजुली चाहिँदैन । चाहियो भने हेरौंला जस्तो गरियो । अबको ५ वर्षमा निजी क्षेत्रले ३ हजार मेगावाट प्रणालीमा थप्दैछ । यो विद्युत् खपतको आधारभूत योजना छैन ।
कोभिड–१९ को मारले धेरै जलविद्युत् आयोजना रुग्ण बनेका छन् । तत्कालीन माओवादीको युद्धकालमा बनेका आयोजना पनि रुग्ण छन् । निर्माणाधीन आयोजना २ वर्ष पछि धकेलिएका छन् । यसबारे पनि सम्बोधन भएन । जलविद्युत् कम्पनी सेयर निष्कासन गर्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्थ्याे । तर, यो कुरा अटाएन ।
‘ग्यासको मूल्य बढाउनुपर्थ्याे’
कुशल गुरुङ, अध्यक्ष (गण्डकी ऊर्जा) : विद्युत खपत बढाउनुपर्ने कुरा हिजोआज हरेक बहसमा सुनिन्छ । आन्तरिक उत्पादन थपिँदै गएकाले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाउनुपर्ने कुरा बजेटले सम्बोधन हुनुपर्ने थियो ।
ग्यासको मूल्य बढाउँदा राजस्व पनि बढ्ने र विद्युत खपत पनि बढ्ने थियो । विद्युत् खपत बढाउन सके प्रदुषण कम हुने थियो । जनस्वास्थ्य राम्रो हुने थियो । बजेट निर्माण गर्ने तहमा बसेकाहरूले यो कुरा किन बुझेनन् ?
संयोजन : धना ढकाल